क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक"। क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक": समीक्षा
यो कुनै क्रेडिट कार्ड संग एक व्यापार व्यक्तिको जीवन कल्पना गर्न गाह्रो छ। र साना छैन पैसा डेबिट र सामान्य प्रयोग संग, कमाउन गर्ने सफल मान्छे को बहुमत , क्रेडिट कार्ड कहिलेकाहीं पनि धेरै। यो उत्पादन आजको लागि मांग जनसंख्याको सबै खण्डहरूमा लागि ठूलो छ, र यो चासो जायज भन्दा बढि छ। यी कार्डहरू तपाईं सधैं निःशुल्क वित्तीय सम्पत्ति एक आपूर्ति, तलब बिना विभिन्न emergencies, स्वभाविक खरिद को घटना बाहिर मदत गर्न, र साँच्चै अनुमति दिन्छ। मिति, यस खण्ड मा धेरै रोचक प्रस्ताव संग बैंकहरू को एक एकदम ठूलो सूची छ। तिनीहरूमध्ये - राम्रो पछिल्लो केही वर्ष, "रूसी मानक" मा सिद्ध। 25 लाख भन्दा बढी रूसी बैंक आज कार्ड उत्पादनहरु प्रयोग गर्नुहोस्। क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक" 40 लाख एकाइहरु को रकम मा जारी, र यो सीमा छैन। के छ त आकर्षक यो हाम्रो देश को नागरिक को लागि हो? कसरी प्राप्त गर्न र बैंकमा आवेदन लागू गरेर के अवस्था गणना गर्नुपर्छ? यी यो लेख जवाफ हुनेछ प्रश्नहरू छन्।
बैंक क्रेडिट कार्ड को सामान्य विवरण
उत्पादन को यस प्रकारको को प्रयोगको लागि अवस्था र नियम भन्दा बैंकहरू लागि समान छन्। तर तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै peculiarities र लाभ छ। उल्लेखनीय क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक" के हो? पहिले, यो प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ, र अक्सर तपाईं पनि बैंकमा जाने गर्न आवश्यक छैन। अनुरोध क्रेडिट संस्थाले मा अनलाइन हुन सक्छ गर्नुहोस्। यो छिटो पैसा प्राप्त, तर सीमित हदसम्म हुनेछ। तथ्यलाई अधिकतम कार्ड सीमा 450 हजार rubles हुन्छ। यस्तो ठूलो योगफल मा गणना गर्न, यो, हुनेछ मानक सेट (पासपोर्ट र दोस्रो कागजात) बाहेक, 2-पिट को प्रमाणपत्र प्रदान गर्न, र यो उद्देश्य लागि बैंक "रूसी मानक" भ्रमण गर्न अझै छ।
एक ठूलो राशि प्राप्त गर्न क्रेडिट कार्ड, र तपाईं अचल सम्पत्ति वा एक कार स्वामित्व छ घटनाको। त्यसपछि तपाईंले आवेदन र डाटा संकेत गर्नुपर्छ। यस्तो स्पष्टीकरण अनुमति दिन्छ राम्रो गर्न बैंक उधारकर्ता को वित्तीय अवस्था आकलन र पैसा को एक ठूलो रकम को प्रयोग उहाँलाई प्रदान गर्नुहोस्।
कार्ड को लाभ - 55 दिन छ जो आफ्नो रुचि-मुक्त, अवधि, मा। यो समयमा, तपाईं बैंकमा थप ब्याज तिर्ने बिना उधारो रकम चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो वैकल्पिक छ। पैसा पनि यो सीमित अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ भने अब को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मात्र अवस्था - मासिक आधार मा प्रयोग क्रेडिट को 5% को एक न्यूनतम भुक्तानी गर्न।
अवकास कार्ड र अवस्था
कसलाई र के अवस्थामा क्रेडिट कार्ड दिइएको छ "रूसी मानक"? आवेदन 25 वर्ष (18 भन्दा बढी ती लागि, एक विशेष प्रस्ताव छ) र 65. कुनै पुरानो भन्दा यस मामलामा भन्दा साना व्यक्ति द्वारा पेश गर्न सकिन्छ, तपाईं निम्न प्रस्ताव मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ:
क्रेडिट सीमा अप 450 हजार rubles गर्न;
0 55 दिन भित्र परिशोधन लागि%;
36% क्रेडिट प्रयोग गर्दा अर्थ 55 दिन भन्दा;
एटीएम देखि नगद withdrawals मा 4.9%;
आवेदन र जारी मुक्त पेश्की;
वार्षिक सेवा 600 rubles।
साथै, सकारात्मक क्रेडिट इतिहास र कार्ड को नियमित प्रयोग को मामला मा, यसको सीमा निरन्तर बढेको गरिनेछ। पनि नक्सामा मतलब बैंक बाँकी एउटा सानो प्रतिशत शुल्क - प्रति वर्ष 3% (एक trifle, तर राम्रो)।
नक्सामा राख्न (आफ्नो निकासी प्रतिशत अनुपस्थित छ लागि) क्रेडिट र इक्विटी दुवै हुन सक्छ। तपाईं रूस र संसारभरि यात्रा दुवै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रेडिट कार्ड को किसिमहरु
अर्को हामी क्रेडिट कार्ड को श्रेणी मा बैंक को सबै भन्दा रोचक प्रस्ताव केही हेर्न।
तपाईंको आवश्यकता आधारमा, तपाईं बैंक "रूसी मानक" को क्रेडिट उत्पादनहरु को एक दायराबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिट कार्ड सर्तहरू, खरिद को प्रशंसक अपिल हुनेछ - "Malina"। सबै मानक सुविधाहरू साथै यो तपाईं हरेक $ 100 कार्ड मा खर्च लागि 10-15 एकाइहरूको रकममा बोनस बलमा कमाउन अनुमति दिन्छ। भविष्यमा, तिनीहरूले एक विशेष सूची "Malina" बाट उपहार लागि साटासाट गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम क्याफे र रेस्टुरेन्ट, इन्टरनेट पसलहरूमा, औषधि पसल, पेट्रोल, शुष्क सफाई र अन्य सेवाहरू को एक किसिम पनि समावेश छ। यो कार्ड उहाँले प्रेम महिला लागि ठूलो उपहार हुन सक्छ।
नगद फिर्ता कार्ड
त्यहाँ किनमेल लाभ उठाउन अनुमति दिने, अन्य आकर्षक क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक" छन्। यसलाई नगद फिर्ता भनिन्छ गर्नुपर्छ। पनि नाम यो सम्भव कार्ड मा खर्च धन को एक भाग फेरि प्रयोगमा ल्याउनु बनाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। पहिलो खरीद संग 10% छ, र भविष्यमा - 1 3% देखि वृद्धि गरी (आधारमा खरिद को मात्रा मा)। यो कार्ड अर्को फाइदा - जो 29% गर्न मानक 36% तुलना क्रेडिट पैसा, को प्रयोग को लागि प्रतिशत। आकर्षक प्रस्ताव सहमत हुनुहुन्छ।
नक्शा निलो अमेरिकन एक्सप्रेस
यो उत्पादन - प्राय यात्रा र आफ्नो धन को सुरक्षा को हेरविचार लिन्छ गर्नेहरूका लागि एक वास्तविक Godsend। के आफ्नो मालिक एक क्रेडिट कार्ड, यो "रूसी मानक" गर्छ? पहिलो, 10 हजार अमेरिकी डलर गर्न (क्षतिपूर्ति) कवर शङ्कास्पद सञ्चालन देखि आफ्नो पैसा सुरक्षित गर्ने क्षमता। दोश्रो, यात्राको दुवै विदेश देश र समयमा कानुनी र चिकित्सा र सामान बीमा। तेस्रो, नक्सा बाट खरिदका लागि प्रतिबद्ध धन को 2% कार्ड फिर्ता। यी सबै लाभ साथै अर्को उपहार - मुक्त बैंकिङ एक वर्ष। यो विशेष गरी शङ्कालु, उत्पादन को सबै सुविधाहरू जाँच आफ्नै धन को एक रूबल खर्च बिना लागि अनुमति दिन्छ। के तपाईं यस क्रेडिट कार्ड रुचि छौँ, देख्नुहुने "रूसी मानक"! समीक्षा यस उत्पादन बारे आउँदै वर्ष मा लाभ उठाउन जारी छ, 900 rubles को मात्रा मा मर्मतका लागत बावजुद पुष्टि गर्छ। खैर, पैसा को प्रयोग को लागि प्रतिशत पनि मानक अवस्थामा भन्दा कम र प्रतिवर्ष 29% छ।
अन्तमा हामी उत्पादन को युवा गर्न पायो, त्यसैले विद्यार्थी जनसंख्या द्वारा चाहनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक" व्यक्ति 18 बर्ष 23 वर्ष प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शाखा मा उच्च शिक्षा संस्थानहरुमा भर्ना लागि हो। यसको दर्ता लागि बैंक विद्यार्थी कार्ड प्रदान गर्न वा आफ्नो स्थिति पुष्टि गर्न पुस्तक रेकर्ड गर्न आवश्यक हुनेछ। जवान लागि, अक्सर बेरोजगार (वा अतिरिक्त कमाउन), यो उत्पादन को विद्यार्थी धेरै आकर्षक छ। यो 200 rubles को कार्ड हुनुपर्छ, र तिनीहरूले मात्र प्रयोग पहिलो वर्षको लागि लिइएको हो। यसमा प्रेरित र रुचि-मुक्त अवधि र मानक अवस्था तलको शर्त - 29%। साथै, यो कार्ड तिर्ने, तपाईं आकर्षक बोनस छूट को रूप मा 30% गर्न क्याफे, क्लब र अन्य मनोरञ्जन स्थानहरू जवान मान्छे लोकप्रिय छन् जो को एक किसिम मा प्राप्त गर्न सक्छन्।
सीमा सन्दर्भमा, सुरुमा सानो आकार स्थापित। सामान्यतया यो 10 हजार rubles, ऋण परिशोधन को मात्रा मा नियमित नवीकरण जो छ। तर, त्यो क्रेडिट सुविधाहरु को एक गम्भीर विद्यार्थी देख्ने भने, बैंक द्वारा कार्ड सीमा स्थिर र सावधान प्रयोग संग वृद्धि हुनेछ। सामान्य मा, यो कार्ड - ठूलो तरिका आफ्नो खर्च को आकार वृद्धि र कसरी क्रेडिट संस्थाहरू अन्तरक्रिया गर्न सिक्न।
आज प्लास्टिक - बटुवा एक सुविधाजनक र अक्सर लागत-प्रभावकारी प्रतिस्थापन। आफ्नो वित्तीय सक्षमता र अनुकूल सर्तहरू मा बैंक पैसा प्रयोग विस्तार गर्न, र केही अवस्थामा व्यावहारिक नि: शुल्क प्रभावकारी उपकरण - क्रेडिट कार्ड "रूसी मानक"। बैंक विभिन्न अवस्थामा र तपाईं आफ्नो आवश्यकता र स्थिति अनुसार चयन गर्न सक्नुहुन्छ बोनस संग विकल्प प्रदान गर्दछ। आफ्नो जीवन धनी र उज्जवल बनाउन एक क्रेडिट कार्ड प्रयोग!
Dresslink: अनलाइन कसरी आदेश
समीक्षा: "बाइनरी Uno"
इन्टरनेट दोकान OOO "TehnoDrayv": समीक्षा
दोकान अनलाइन KupiVip ( "किन्नुहोस वीआईपी '): ग्राहक समीक्षा र कर्मचारी
कसरी इन्टरनेट मा काम पाउन?
को दीर्घ पुनर्निर्माण: Dmitrovskoe
नुस्खा क्रीम स्पन्जले केक: हरेक स्वाद को लागि विकल्प
जोनास Enlund - फिनल्याण्ड देखि अगाडी
खतरनाक उच्च हेमोग्लोबिन के हो?
Nizhny Novgorod मा वोल्गा नदीको एउटा क्रूज - एक परी कथा मा एउटा यात्रा
कड लिवर तेल को नुस्खा सलाद - कसैले प्रतिरोध गर्न सक्छौं
Kalina गर्न कूलर हीटिंग को प्रतिस्थापन कस्तो छ?
किर्गिज राजनीतिज्ञ र statesman Kurmanbek Bakiyev: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य विशेषताहरु
"प्रेरणा" - चिकन स्तन र खुशबूदार छम संग सलाद
बच्चाहरु Playfully संकटहरूको हटाउन
जो छिमेकी देशहरू रूस दक्षिण र पूर्व देखि यो चारै ओर